ဦး Launcher ကို Lite ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » ဦး Launcher ကို Lite ကို - အခမဲ့တိုက်ရိုက် Cool Themes, Apps ကပ Hide
ဦး Launcher ကို Lite ကို - အခမဲ့တိုက်ရိုက် Cool Themes, Apps ကပ APK ကို Hide
ဦး Launcher ကို Lite ကိုဦး Launcher ကို 3D တစ် Lite ဗားရှင်းဖြစ်ပါသည်, သငျသညျပေးသင်တစ်ဦးပိုမိုမြန်ဆန် experience.The ဦး Launcher ကို Lite- 2017 နောက်ဆုံးပေါ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ launcher ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် အကောင်းဆုံး 3d ဆိုးကျိုးများ အတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ ဖုန်းအသစ် themes များ ပန်းသီးစတိုင်အဘို့။ Android အတွက်နေ့စဉ် update ကို themes များနှင့်အတူ, သငျသညျမဆိုအခြားဖုန်းများမှသင့်ရဲ့ smartphone ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ 3d အဓိကအကြောင်းအရာက Android ကိုအခမဲ့ iPhone နောက်ခံပုံများနှင့်အတူဦး Launcher ကို Lite ကို, SAFE SMART, SPEED နှင့်အမျိုးမျိုးသောဟာ android လည်ပတ်မှုစနစ်အဘို့အစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦး Launcher ကို Lite ကိုနှင့်အတူသငျသညျအရနိုင်သည်
- အမျိုးမျိုးသောဖုန်းကို themes များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အသစ်ကအခမဲ့နောက်ခံပုံများ အတှေ့အကွုံကဲ့သို့ iOS 10 နဲ့တူချောမွေ့ interface ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ နေ့စဉ် update ကိုစိတ္တဇ, အေးမြနည်းပညာ, ဇိမ်ခံ, စတိုင်အခမဲ့ themes များ, သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ။
- စိတ်ကြိုက် Interface: ရိုးရှင်းသောကလစ်နှင့်အတူတစ်ဦးအေးမြနဲ့အံ့သြဖွယ်မိုဘိုင်းအင်တာဖေ့စရယူပါ။ စတာတွေကဒီအခမဲ့စတင်ကသင်သည်နိုင်ပါတယ် DIY themes များ, icon များ, နောက်ခံပုံများနှင့်အတူ
- ဖျောက် apps များ & မျက်နှာပြင်သော့ ပတ်လည်သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပါရန်။
- လျင်မြန်စွာရှာဖွေရေး & app ကိုပေးရမည် customize app ကိုရှာဖွေရေးပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါသည်။
theme-သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: luancher DIY ဆောင်ပုဒ် store မှာစိတ်တိုင်းကျအိုင်ကွန်ထုပ်နှင့်နောက်ခံပုံများသင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှကို themes များသင်ပေးပါ။ အေးမြ Tech မှ, ချစ်စရာ, နီယွန်, တိရိစ္ဆာန်ပေ ... ဒီနေရာတွင်မဆိုမျိုးသို့မဟုတ်ရှေးရှေးအဘို့ဟာ android အခမဲ့ themes များတွေ့ပါလိမ့်မည်! ကျနော်တို့လတ်ဆတ်နှင့်စတိုင်သင့်ရဲ့ home screen ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနေ့တိုင်းအခမဲ့ဝေါလ်ပေပါကို update သူကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်နာများပိုင်ဆိုင်!
- ဖျောက် Apps ကပ: password ကို save နှင့်သင်လိုချင်သော apps တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ရန် icon ပေါ်တွင်ထိပုတ် zoom ကိုနဲ့တူအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ screen ပေါ်မှာအနည်းငယ် pinch နဲ့ settings ကိုသွားပါ။
widget: အသုံးဝင် Widgets နဲ့ shortcuts တွေကိုထည့်သွင်းဖို့အိမ် screen ပေါ်မှာ Long ကစာနယ်ဇင်း, သင့် android ဖုန်းကိုအတှေ့အကွုံဆောင်ကြဉ်းပိုပြီးထိရောက်။
⚙ Personalisation စာ setting များကို: သင်၏ကိုယ်ပိုင် launcher customize
speed booster: သင်၏ဖုန်းပေါ်မှာပိုပြီးမှတ်ဥာဏ် (RAM) ကိုတက်လွတ်မြောက်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့စွာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရန်သင့် home screen ကနေတိုက်ရိုက်တစ်ဦးတည်းသာအသာပုတ်နှင့်အတူဘက်ထရီသိမ်းဆည်းပါ။
quick ရှာရန်: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်ဦး Launcher ကိုရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု. လျှပ်စစ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူအင်တာနက်ကို browse ကြားပြောင်းလဲမည်။
ကောင်းတဲ့အသံ? သင့်အဘို့ဖြစ်ရမည်နိုင်! အခုစမ်းကြည့်ပါ!
ဦး Launcher ကို Lite ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:
1 ။ ဝှက် apps များရှာတွေ့မှဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါဝှက် apps များတွေ့ပါနဲ့ password ကိုတင်ထားရန်ပင်မမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ် apps များအံဆွဲအပေါ် zoom ကိုနဲ့တူအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ screen ပေါ်မှာအနည်းငယ် pinch ။
2 ။ ဦး Launcher ကို Lite ကို widget ကဘားတန်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အိမ် screen ပေါ်မှာ Long ကစာနယ်ဇင်းအမူအရာ။
3 ။ ယင်းမျက်နှာပြင် Manager ကို menus တွေဝင်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အိမ် screen ပေါ်မှာလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနှင့်အတူလက်ဟန်ခြေဟန်အတွက် pinch ဒါမှမဟုတ်အမြန် setting ကိုစာမျက်နှာကိုရှာတက်ပွတ်ဆွဲပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှု: ဦး Launcher ကို Lite ကိုအန်းဒရွိုက် 2.3 + မှမရရှိနိုင်ပါ။
Facebook မှာ: facebook.com/CLauncherFan/?fref=nf
- နယူးအင်္ဂါရပ်လွှတ်ပေးရန်: တိုက်ရိုက် Wallpaper ။
သငျသညျတှေ့ရနှင့်ဦး launcher နောက်ခံပုံများအတွက်သူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
ဦး Launcher ကို Lite ကို - အခမဲ့တိုက်ရိုက် Cool Themes, Apps ကပ Hide
8.91 ကို MB
X ကိုဖွင့်တင် Lite ကို: ...